TrueReview: सजिलै पूनरावलोकनहरू स Collect्कलन गर्नुहोस् र तपाईंको व्यवसायको प्रतिष्ठा र दृश्यता बढाउनुहोस् Martech Zone
आज बिहान म एक ग्राहकसँग भेट गर्दै थिएँ जसको व्यवसायमा बहु स्थानहरू छन्। जबकि तिनीहरूको कार्बनिक दृश्यता उनीहरूको साइटका लागि भयानक थियो, गुगलमा तिनीहरूको स्थान नक्शा प्याक सेक्शन शानदार थियो।
यो एक उपद्रव हो जुन धेरै व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनन्। क्षेत्रीय खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरूमा pages मुख्य सेक्सनहरू छन्:
भुक्तान गरिएको खोजी - साना पाठबाट निषेधित कि विज्ञापन, विज्ञापन पृष्ठ को शीर्ष मा प्रमुख रूप मा प्रमुख छन्। यी स्पटहरू वास्तविक समयमा बोलपत्र गरिन्छ र विज्ञापनदाता प्रति क्लिक वा फोन कल भुक्तान गर्दछ।
नक्शा प्याक - एक महत्त्वपूर्ण आकारको नक्शा पृष्ठको महत्वपूर्ण हिस्सा हो र तिनीहरूले व्यवसायहरू, उनीहरूको रेटिंग्स र अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शन गर्दछन्। यस सेक्सनको श्रेणीकरण व्यवसाय 'रेटिंग्स, समीक्षा, र तिनीहरूको गुगल व्यापार पृष्ठमा प्रकाशन गर्न गतिविधि द्वारा निर्धारित गरिन्छ।
कार्बनिक खोजी - पृष्ठको आधारमा जैविक परिणामहरू, अनुक्रमित कम्पनीहरूको वास्तविक वेबसाइटमा लिंकहरू, र सर्च इन्जिन प्रयोगकर्ताले प्रविष्ट गरेको सर्तहरूको लागि राम्रो क्रममा छन्।
SERP नक्शा प्याकलाई वर्गीकरण गर्दै
जैसा कि तपाईंले माथि वर्णन गरिएको देख्नुभयो ... समीक्षा र गतिविधिमा आधारित तपाईंको गुगल व्यवसाय पृष्ठमा प्रतिष्ठानको विरूद्ध तपाईंको डोमेनको प्रतिष्ठा बिभिन्न भिन्न छन्। वास्तवमा, तपाईसँग पूर्ण रूपमा अर्को बिना नै हुन सक्छ (यद्यपि मैले यसलाई सिफारिश गरेन)।
किन यो ग्राहकले यति राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको थियो कि केहि वर्ष अघि तिनीहरूले प्रक्रियामा राखे प्रत्येक ग्राहक बाट अनलाइन समीक्षा माग्छन् कि तिनीहरूले सेवा दिए। जब तिनीहरूले समीक्षा स accum्कलन गर्न थाले ... तिनीहरूले खोज इञ्जिनबाट बढेको रेफरलहरूको संख्या देख्न शुरू गरे।
यदि तपाईं एक स्थानीय सेवा प्रदायक वा खुद्रा आउटलेट हुनुहुन्छ भने, समीक्षा तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग प्रयासको लागि महत्वपूर्ण छ। तपाईको व्यवसायलाई सुधार गर्नका लागि केवल महान प्रतिक्रिया मात्र होइन, उल्लेखनीय समीक्षालाई कायम राख्दा अधिक र अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यदि तपाईंसँग समीक्षा सजिलैसँग स collect्कलन गर्ने तरिका छैन भने, जस्तो तपाईंलाई सेवामा पूर्ण रूपमा सदस्यता लिनु पर्छ TrueReview.
TrueReview समीक्षा संग्रह सुविधाहरू
TrueReview कुनै पनि वेबसाइटको लागि समीक्षा अनुरोध गर्न व्यवसायका लागि सजिलो बनाउँदछ, प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिक्रिया लिन, र अनलाइन समीक्षा सुधार गर्दछ। TrueReview ले ब्यापारहरूलाई SMS र ईमेल समीक्षा पठाउन वा सर्वेक्षण अनुरोधहरू सक्षम गर्दछ, ग्राहकहरूलाई प्रतिक्रिया प्रदान गर्न सजिलो बनाउँदै। सबै भन्दा राम्रो, तपाईं समस्या समाधान भएको सुनिश्चित गर्न नकारात्मक समीक्षा रोक्न सक्नुहुन्छ।
SMS अनुरोधहरू - अनुकूलन SMS समीक्षा अनुरोध पठाउनुहोस् तपाईंको ड्यासबोर्डबाट। तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ को लागी निर्दिष्ट वेबसाइटहरु मा एक समीक्षा छोड्न कस्टम लिंक प्राप्त गर्नेछ।
ईमेल अनुरोधहरू - अनुकूलन ईमेल समीक्षा अनुरोध पठाउनुहोस् तपाईको ड्यासबोर्डबाट। तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ को लागी निर्दिष्ट वेबसाइटहरु मा एक समीक्षा छोड्न कस्टम लिंक प्राप्त गर्नेछ।
थोक अनुरोधहरू पठाउनुहोस् - एक एक गरी समीक्षा अनुरोध पठाउँदै समय खपत गर्ने छ। CSV मार्फत तपाईंको सम्पर्कहरू आयात गर्नुहोस् र एकै पटक सयौं समीक्षा अनुरोधहरू पठाउनुहोस्।
ड्रिप अभियानहरू - एसएमएस र ईमेल सन्देशहरू स्वचालित गरेर तपाईंको समीक्षा अनुरोधबाट अझ बढी प्राप्त गर्नुहोस्। TrueReview ले यसलाई तपाइँको ग्राहकहरु को लागी स्वचालित ड्रिप अभियानहरु सिर्जना गर्न सुपर सरल बनाउँछ।
नकारात्मक समीक्षालाई वेवास्ता गर्नुहोस् - खुशी ग्राहकहरूले समीक्षा छोड्छन् र असन्तुष्ट व्यक्तिले सीधा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, वा कुरा सही बनाउनको लागि तपाईंसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। नराम्रो ग्राहकहरुलाई खराब समीक्षा छोड्नुहोस् र तपाइँको अनलाइन प्रतिष्ठालाई हानि नदिनुहोस्!
प्रतिक्रिया स Collect्कलन गर्नुहोस् - यदि सर्वेक्षण परिणामहरू सकारात्मक छन् भने तपाईंको समीक्षा वेबसाइटहरू देखाउनुहोस्, वा सर्वेक्षण परिणामहरू नकारात्मक भएमा तपाईंको ग्राहकहरूलाई सीधा प्रतिक्रिया दिनको लागि द्रुत तरीका प्रदान गर्नुहोस्।
साइटहरू समीक्षा गर्नुहोस् - समीक्षा साइटहरू जुन पहिल्यै कन्फिगर गरिएको छ गुगल, फेसबुक, येलप, एन्जीको सूची, फोरस्क्वायर, पहेलो पृष्ठहरू, जिलो, कम्पास, रियल्टर डॉट कॉम, रेडफिन, अमेजन, र अधिक समावेश गर्दछ। र यदि एक अवस्थित छैन भने, तपाईं अनुकूलन समीक्षा लिंक थप्न सक्नुहुन्छ!
हेर्नुहोस् र जवाफ दिनुहोस् - TrueReview को साथ, तपाई तिनीहरूको समिक्षाका केन्द्रबिन्दु भित्र तपाईका सबै समीक्षाहरुको अवलोकन र जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।
एकीकरण - तपाईंको मनपर्ने सीआरएम सफ्टवेयर जडान गर्नुहोस् तपाईंको ग्राहकहरूलाई स्वचालित रूपमा अनुरोध पठाउन, वा तपाईंको सम्पर्क पृष्ठमा नयाँ सम्पर्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् जब तपाईं एक काम पूरा गर्नुहुन्छ, टिकट बन्द गर्नुभयो, सेवाको लागि भुक्तानी पाउनुहुनेछ, र अधिक! एकीकरणमा गोकानवास, सेटमोर अपोइन्टमेन्ट्स, गुगल सम्पर्क, हाउसकाल प्रो, स्क्वायर, जॉबेर, रियल इस्टेट वेबमास्टर्स, सर्विसटिटन, मेलचिमप, गुगल शीट्स, हबस्पट, एक्च्युटी शेड्यूलिंग, लायनडेस्क र अधिक समावेश छ।
नि: शुल्क १--दिन परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु TrueReview र लेख भर मा मेरो सम्बद्ध लिंक को उपयोग गर्दै।
टैग: एक्युटी तालिकाबल्क समीक्षा अनुरोधहरूसमीक्षा संकलन गर्नुहोस्ग्राहक प्रतिक्रियाईमेल समीक्षाGoCanvasGoogle सम्पर्कहरूGoogle पानाहरूहाउसकल प्रोहबस्पटJobberLionDeskmailchimpनक्शा प्याकनकारात्मक समीक्षाअनलाइन समीक्षाघर जग्गा वेबमास्टर्ससमीक्षासर्विसटिटनसेटमोर अपोइन्टमेन्टहरूएसएमएस समीक्षावर्गसर्वेक्षणTruereview